Soo saaraha Shiinaha iyo Soo-saaraha Biyaha | Xinneng
Qaybta kala qaybsan
Qaybta biyaha lagu qaboojiyo
Qaybta biyaha-qaboojisa ee badanaa loo yaqaan qaboojiyaha, qaboojiyaha, mashiinka biyaha barafka, mishiinka biyaha qaboojiya, mashiinka qaboojinta, iwm, sababtoo ah isticmaalka ballaaran ee dhammaan qaybaha nolosha, sidaas darteed magacu waa mid aan la tirin karin. mashiinka ka qaada uumiga dareeraha ah iyada oo loo marayo isku-buufinta ama wareegga qaboojiyaha wareegga qaboojiyaha Chiller-ka wuxuu ka kooban yahay afar qaybood oo waaweyn oo ah isku-buufinta wareegga wareegga uumiga kombaresarada, uumiyaha, kondenser, iyo qayb ka mid ah qalabka cabbirka qaab qaboojiye ka duwan.
Qaybta biyaha-qaboojisa ee badanaa loo yaqaan qaboojiyaha, qaboojiyaha, mashiinka biyaha barafka, mishiinka biyaha qaboojiya, mashiinka qaboojinta, iwm, sababtoo ah isticmaalka ballaaran ee dhammaan qaybaha nolosha, sidaas darteed magacu waa mid aan la tirin karin. mashiinka ka qaada uumiga dareeraha ah iyada oo loo marayo isku-buufinta ama wareegga qaboojiyaha wareegga qaboojiyaha. Qalabka isku-buufinta uumiga wuxuu ka kooban yahay afar qaybood oo muhiim ah oo ah isku-buufinta wareegga wareegga uumiga, uumi-bixiye, isku-buufiyaha, iyo qayb ka mid ah qalabka cabbirka qaab qaboojiye ka duwan chiller waxay u isticmaashaa biyo qaboojiye ahaan, waxayna ku tiirsan tahay biyaha iyo xalka lithium bromide inta udhaxeysa, si loo gaaro saameyn qaboojiye oo isku xiran.
Unugga biyo-qaboojiyaha waxaa badanaa loo isticmaalaa qaybaha qaboojiyaha iyo qaboojinta warshadaha. Nidaamyada qaboojinta, biyaha la qaboojiyey waxaa badanaa loo qaybiyaa kuwa isweydaarsada kuleylka ama gariiradda ku jira unugyada maareynta hawada ama noocyada kale ee qalabka terminaalka loogu talagalay qaboojinta Meelahooda, ka dibna Biyaha qaboojinta waxaa dib loogu qaybiyey qaboojinta la qaboojiyey. Codsiyada warshadaha, biyaha la qaboojiyey ama dareerayaasha kale waxaa lagu qaboojiyaa bambooyin iyada oo loo marayo hababka ama qalabka sheybaarka. Qalabka qaboojiyaha waxaa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo wax soo saarka, farsamada iyo makiinadaha dhirta qaboojinta ee dhammaan dhinacyada nolosha.
Xogta farsamada ee unugga biyaha lagu qaboojiyey
Model Awooda w Uumiga uumi baxa Jawiga deegaanka. Kondensarka Dimension① mm Qalabka cabbirka① mm Ku xirida tuuboyinka mm Miisaanka kg
Biyaha m³ / h Model A B C D E Hawada Dareeraha
ParametersQiyaasaha kor ku xusan waxay ku xiran yihiin xogta dhabta ah.
DieAddieional iskaashi ama xaddidan suheerkulka gaaska ction haddii heerkulka saadku ka hooseeyo -15 ℃.
DieIndiyajiinta isdifaacaysa ama heerkulka gaaska nuugista xaddidan ama qaboojinta duritaanka dareeraha ah haddii heerkulka saadku uu ka hooseeyo -20 ℃.
Hore: Furan Nooca Nooca
Xiga: Generator Nooca Weelka